दोलखाका मतदाता सोध्छन्, 'कहिले पाइन्छ माथिल्लो तामाकोशीको शेयर'
दोलखा, ६ मंसिर (रासस) : कालिञ्चोक–९ का हरिबहादुर खड्काले तीन वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले शेयर दिन्छ रे भन्ने सुनेको । तर अहिलेसम्म किन शेयर दिइएन भनेर कोही कसैले पनि चित्त बुझ्ने गरी बताएका छैनन् । आफूसँग भएको थोर बहुत पैसा लगानी गर्ने इच्छा छ । तर जानकारी नपाएकामा उहाँको गुनासो छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत माग्न गाउँ पसेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई खड्काले पटक पटक सोध्नुभयो माथिल्लो तामाकोशीको शेयर कहिले पाइन्छ होला ? तर उम्मेदवारले पनि हालसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेका उहाँ बताउनुहुन्छ ।
शेयरका बारेमा जसले राम्रोसँग जानकारी दिन्छ उसैलाई यस पटकको मत दिने सोचाइमा हुनुहुन्छ खड्का । रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बूढेसकालमा गरिखान नसक्ने भएपछि त्यही शेयर नै आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने भरोसा बन्छ ।”
कालिञ्चोक–९ कै ६८ वर्षीय नारायण शाहीलाई पनि माथिल्लो तामाकोशीको शेयरका बारेमा खुबै चासो छ । आयोजना शुरु भएदेखि नै स्थानीयवासीलाई शेयर दिन्छन्, राम्रो कमाई हुन्छ भन्ने सुनेको हो तर अहिलेसम्म कुनै छेउ–टुप्पो नलागेको उहाँलाई पनि चित्त बुझेको छैन ।
निर्वाचनमा मत माग्न गाउँ आएका उम्मेदवारसँग उहाँले पनि सोध्नुभयो, “शेयर कहिले पाइन्छ, हामीले कहिले हो लगानी गर्न पाउने ?” कोहीले माघ पछि पाइन्छ भनेका छन् त कोहीले आफूलाई जानकारी नभएको र पछि जानकारी दिउँला भन्दै हिँडेका शाहीले बताउनुभयो ।
“हामी दोलखावासीलाई माथिल्लो तामाकोशीको शेयरका बारेमा जसले राम्रोसँग बुझाउँछ, सोही पार्टीलाई मतदान गछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दोलखाकै मतदाता कुमारप्रसाद प्रसाईं माथिल्लो तामाकोशीका बारेमा कुरा गर्न अग्रसर देखिनुभयो । “हाम्रै देशको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा हाम्रो पनि लगानी हुनुप¥यो नि ?” उहाँले भन्नुभयो । थोर बहुत लगानी गर्ने इच्छा छ, उहाँलाई ।
आगामी मंसिर १० गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मत माग्न आएका उम्मेदवारलाई उहाँले पनि सोध्नु भयो, “शेयर कहिले पाइन्छ त नेताज्यू ?” कस्तो उत्तर पाउनु भयो त तपाईंले ? भन्ने राससको प्रश्नमा प्रसाईलें भन्नुभयो, “केही समयपछि दिन्छौँ भनेका छन् ? आशा छ, हामी दोलखालीले केही समयभित्रै माथिल्लो तामाकोशीको शेयर पाउँछौ ।”
सुन्द्रावतीका डम्बर ओलीलाई शेयरका बारेमा बढी चासो छ । “सार्वजनिक भाषणमा नै नेताले शेयरका बारेमा बताइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
लामाबगरका पेम्बा शेर्पालाई पनि आफ्नै घर–आँगनमा बन्दै गरेको आयोजनामा कहिले लगानी गर्न पाइएला भन्ने प्रतीक्षा छ । शेर्पा भन्नुहुन्छ, “पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो तर न त हालसम्म आयोजनाले बताएको छ, न त मत माग्न आएका नेताले नै । छिट्टै दिए हुन्थ्यो ।”
प्रतिनिधिसभातर्फ वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पार्वत गुरुङ स्थानीय मतदाताले माथिल्लो तामाकोशीको शेयरका बारेमा आफूलाई दर्जनौँ पटक प्रश्न गरेका बताउनुहुन्छ । “हामीले मत माग्ने क्रममा छिट्टै आयोजनाले शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिने गरेका छौँ । जनता पनि आश्वस्त भएका छन्”, गुरुङले भन्नुभयो, “साधारण शेयरप्रति जनताको ठूलो र व्यग्र प्रतीक्षा छ ।”
काँग्रेसका तर्फबाट रुद्रबहादुर खड्का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने प्रदेश ‘क’मा केशव चौलागाईं र ‘ख’ बर्मा लामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश ‘क’ मा विशाल खड्का र प्रदेश ‘ख’ मा पशुपति चौलागार्इं उम्मेदवार हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म एमालेको राजनीतिमा संलग्न जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति लालकुमार केसी पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । उम्मेदवारी दिएका अधिकांश नेतालाई मतदाताले अरू विकास निर्माणको कामभन्दा पनि माथिल्लो तामाकोशीका बारेमा नै बढी चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । काँग्रेसका उम्मेदवार खड्का मतदाताले शेयरका बारेमा चासो व्यक्त गरेको स्वीकार गर्दै चुनाव लगत्तै वितरण गर्नेतर्फ पहल गर्ने बताउनुहुन्छ ।
यस्तै प्रदेशसभाका उम्मेदवार खड्का, चौलागाईं, केशव पौडेल पनि स्थानीयवासीको चासोलाई सम्बोधन गर्दै आयोजनाबाट छिट्टै साधारण शेयर जिल्लावासीलाई वितरण गराउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ ।